Esemokwu dị n'etiti ike ikuku na ike ife | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Esemokwu dị n'etiti ike ikuku na ike ife
Daniel Palomino | | Ike mmiri, Efu Ike
Ike ha abụọ sitere n'oké osimiri, mana ị maara ebe ike ikuku na ike ife si abịa?
Eziokwu bụ na ọ dị mfe ịmata ihe ike ọ bụ na ọ bụ na aha ahụ na-enye ọtụtụ njirisi, dịka ọmụmaatụ na-agbagharị, na-abịa site na ebili mmiri na mmiri, na-esikwuru ntakịrị ike, ọ na-abịa ife.
Na nkenke na ihe omuma di nkpa nke ị gha edobe bu na Ike mmiri Dị ka anyị kwuru na ọ na-abịa site tides, a ije nke mejupụtara a oke osimiri ma mepụta ugboro abụọ n'ụbọchị site na mma nke ọnwa.
Ojiji nke ụdị ike a bụ nke ukwuu yiri ike hydroelectric (Anyị ga-ekwu maka ya n'ọdịnihu). Ozugbo anyi nwere mmiri mgbochi di na uzo mmiri (onu uzo a bu otu ogwe aka di elu nke nwere oghere di elu) nke nwere onu uzo na akuku hydraulic arụnyere, anyị na-enye mkpa ịdị elu nke ebili mmiri ahụ nwere ike iru.
Nke ahụ bụ, mgbe oke mmiri na-eru (ebili mmiri ebili), a na-emepe ọnụ ụzọ ndị ahụ site na iji mmiri na-abanye turbines na-abanye n'okporo mmiri ma mesịa buru mmiri zuru oke ma si otú a nwee ike imechi ọnụ ụzọ ámá na-egbochi mmiri ahụ site na ịlaghachi n'oké osimiri.
Ozugbo mmiri dị ala rutere (obere mmiri), a na-ahapụ mmiri ahụ site na turbines.
Mmeghari nke mmiri a na - eme ka turbines na - agbanwe ma na - abanye ma na - apụ na mmiri na ọ bụ ihe na - emepụta mmepụta nke ike eletrik.
Na ike mmiri anyị nwere ike ịchọta ma ọghọm na ọghọm.
N'ime uru ndị enwere ike ịsị na ọ bụ ume ọhụrụ na yana ọ bụ ume ọfụma, ebe ọ bụ na ebili mmiri na-agagharị na agbanyeghị afọ.
Agbanyeghị, ọghọm dị ukwuu, dịka nke ahụ na ọ nwere mmepụta ume na-adịghị akwụsị akwụsị, ị ga-echere n'isi ụtụtụ na mbubreyo iji mepụta ya, nha na ọnụ ahịa nke akụrụngwa gị, wdg.
N'aka nke ọzọ anyị nwere ebili mmiri, nke bụ ihe ọ bụla karịa ike nke ebili mmiri dị ka m kwuru na mbụ na bụ na ebili mmiri n’oké osimiri nwere nnukwu ume sitere na ifufe, nke mere na enwere ike ịhụ elu oke osimiri dị ka onye na-achịkọta ikuku nke ikuku.
Ọ bụ otu n'ime ụdị ume ọhụrụ a na-amụkarị taa na enwere ọtụtụ ngwaọrụ dịka Cockerell's Raft na Salter's Duck iji gbanwee ntụgharị ntụgharị n'ime ọkụ eletrik
Duck Salter bụ mmiri nke dị n'ọdịdị ọbọgwụ (yabụ aha ya) ebe akụkụ kachasị mkpa na-emegide ebili mmiri iji nwee ike ịmịgharị mmegharị ha yana o kwere mee. Mmiri ndị a na-agbagharị n'okpuru ọrụ nke ebili mmiri gburugburu axis na-enye ntụgharị ntụgharị gburugburu gburugburu ya, na-achịkwa iji mee ka mgbapụta mmanụ rụọ ọrụ, na-ahụ maka ịkwaga turbine.
Kama nke ahụ, ụgbọ elu Cockerrel nwere nyiwe a na-akọwakarị nke dị njikere ịnata mmetụta nke ebili mmiri. Ihe ndị a na-agbago ma na-agbadata site na iji ngagharị a na-ebugharị injin na-ebugharị generator site na sistemụ hydraulic.
Agbanyeghị, enwerekwa ọghọm na ọghọm, dị ka uru anyị na-ahụ na mmetụta gburugburu ebe obibi bụ ihe efu, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị dị n'ụsọ oké osimiri nwere ike ịbanye na ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ogige ndị ọzọ na-ekwughi na ọ bụ isi iyi nke ume ọhụrụ.
Dị ka ndọghachi azụ; Enweghi ike ibu amuma ike ikuku, ebe obu na ebili mmiri na-adabere na onodu ubochi, na ntinye nke ime ala o di oke nkpa iji zipu ike emeputara n'ala ala, wdg.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dị mfe ịmata ọdịiche dị n'etiti ụdị ike abụọ a na-emepụta n'oké osimiri, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike iji ike sitere na mmiri oke osimiri, ntụgharị nke ike ikuku na oke ike sitere na gradient saline, ihe na-adịkarịghị mana na Taa anyị na-amụ ihe iji nweta ihe kacha mma na oke osimiri ma gbalịa na n'ọdịnihu obodo niile nwere ike iji aka ha nwee ụdị ume a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike mmiri » Esemokwu dị n'etiti ike ikuku na ike ife
Ndị France enweela ebe ha na-arịa ọrịa moto n'ime ala nke Osimiri Rance maka afọ 50, na n'adịghị ka Zapatero, ha kpebiri maka nyocha na ike a, na-enwe otu ahụmahụ, kama ịnye ọtụtụ ijeri akpụkpọ ụkwụ na ike, nyocha, na na-enweghị uru ọ bara ma. Ọ bụrụ na anyị amaraworị na n'ọdịnihu ọ ga-aba uru, mgbe ahụ anyị ga-etinye ego n'ụzọ kwesịrị ekwesị na teknụzụ.
Zaghachi Josep Ribes
Enweghị m ike ikwenye karịa gị Josep.
Valladolid na-agba ume iji igwe kwụ otu ebe n'ihi mmetọ dị elu
Spain ga etinye ego na ụgbọ ala eletrik iji soro EU